Mustafe Cag jar wuxuu yidhi “Dib u curashadu si qaldan ayaa loo fuliyay, waxaa muhiim ah in deegaan kasta ay maamulaan dad u dhashay”. – Xeernews24
Mustafe Cag jar wuxuu yidhi “Dib u curashadu si qaldan ayaa loo fuliyay, waxaa muhiim ah in deegaan kasta ay maamulaan dad u dhashay”.
27. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
ku simaha madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cumar ayaa markii ugu horeysay ka shanqadhiyay barnaamijkiisa siyaasadeed iyo wax qabadka marka uu soo dhiso golaha wasiiradda.
Isaga laftiisa waxa uu ku yimid isbadal siyaasadeed kii ugu balaadhnaa oo ka dhacay guud ahaan Itoobiya tan iyo intii uu xilka Ra’isulwasaarenimada qabtay Abiy Axmed, sidaas darteed Mustafa Cumar waxa uu doonayaa in isbadalada ka socda guud ahaan Itoobiya ay ka dhaqangalaan deegaanka Soomaalida.
Isaga oo hadlayana waxa uu yidhi “Isbadalka heerka qaran ka socda ma jirto sabab uu deegaanka Soomaalida uga hadho, waxaanan rabaa in uu halkan ka socda, sida xagga dimoqoraadiyadda, xuquuqda insaanka, hormarka, iyo in lasoo afjaro colaadaha”.
ku Simaha madaxweynaha Mustafa waxa ugu dambeeya ee uu jeclaan lahaa in uu arko ayaa ah in sharcigii iyo kala dambeyntii ay burburto xilli deegaanka uu galay marxalado adag, sidaas darteed wuxuu doonayaa in sharciga uu sareeyo.
“Soo celinta sareynta sharciga , xuquuqul qowlka, lana joojiyo ku tagri falka awoodaha xad dhaafka ah” ayuu yidhi sii hayaha xilka madaxweyne Mustafe cagjar.
Waxyaabihii ugu horeeyay ee uu durba hirgaliyay madaxweyne kuxigeen Mustafa waxaa ka mid ah in lasoo celiyay calankii xiddigta shanta gees ay ku tiilay ee hore deegaanka u lahaa iyo waliba magacii oo lagu soo koobay Dowlad Deegaanka Soomaalida.
“In lasoo celiyo astaamihii Soomaalinimo ee muujinayay isirka aan kasoo jeedno, taas oo aan wax dhimaal ku ahayn in aan ka tirsanaano dowladda federaalka, Itoobiya boqol qoowmiyadood ayay leedahay, cid kasta dhaqan, diin iyo af u gaar ah ayay leedahay, kuwaana waxaan uga cararnaa meesha ma taalo” ayuu baarlamaanka ka hor yidhi Mustafa Cagjar oo uu sacab weyn u dhacay.
Haddaba madaxweyne ku xigeen Mustafe Cagjar oo arrintaas ka hadlay ayaa yidhi “Waxaan rabnaa in aan soo celino qeybta uu deegaanka ku leeyahay awood qeybsiga iyo kheyraadka dalka”.
Balse Madaxweyne ku xiggeen Mustafe ayaa doonaya, sheegayna in uu wax ka qabanayo arrinkaas “Is dhexgalka, oo ay koow ka tahay in dadka aan Soomaalida nahay dhex galno. Xudduudaha isu furno, dadka isu talaabaan, wada ganacsadaan, wixii ka baxsan siyaasadda ay isku mid ahaadaan”.
Madaxweyne ku xiggeenka cusub ayaa balanqaaday in dowladdiisa aysan farogalin doonin arrimaha diinta, dadkana ay xor u ahaan doonaan in ay cibaadeystaan, wuxuuna yidhi “In aan wax ka badalno dhibaatooyinkii ku dhacay xagga diinta, in dadka ay u madax banaanaadaan cibaadada, dowladana ay faraha kala baxdo”.
Madaxweyne ku xiggenka cusub ayaa dhanka kale balan qaaday in dadka la takooro loo sameyn doono barnaamijyo dowladdeed oo u gaar ah oo lagu hormarin doono, wuxuuna ka yidhi “In la taageero dhab ah loo sameeyo dadka la heeb sooco ee Soomaaliyeed, taas oo aan dhammaanteed ku ceebeysanahay, in dhanka shaqaaleynta, guryaha iyo waxbarashadaba barnaamijyo u gaar ah loo sameeyo”.
Madaxweyne ku xiggeen Mustafe ayaa ka hadlay barnaamijkii dib u curashada ee xukuumaddii Cabdi Maxamuud Cumar, (Cabdi Iley)taas oo uu sheegay in si khaldan loo waday, balse isaga uu sheegay in sidii saxda ahayd loo wajihi doono.
Isaga oo arrintaas ka hadlayana Mustafe Cag jar wuxuu yidhi “Dib u curashadu si qaldan ayaa loo fuliyay, waxaa muhiim ah in deegaan kasta ay maamulaan dad u dhashay” qodobkan oo noqon doona codkii ay reer Sitti dooda kulul ka keeneen ee sababtay Kacdoonkii Cabdi Iley xilka looga tuuray.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/cag.jpg 360 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-27 13:42:232018-08-27 13:42:23Mustafe Cag jar wuxuu yidhi “Dib u curashadu si qaldan ayaa loo fuliyay, waxaa muhiim ah in deegaan kasta ay maamulaan dad u dhashay”.
ku Simaha Madaxweynaha Soomaali State oo soo bandhigay 5-ta qodob ee uu wax... DAAWO;Sawirro) Cabdi iley oo xabsi loo taxaabay [ciidamada oo xabsiga dhigay...